Activities - Myanmar Noble University
MNC is one of the approved center of Edexcel, UK’s largest awarding organization offering academic and vocational qualifications.
6th HND & 1st Bachelor Graduation Ceremony
👑🎓~ Myanmar Noble University Graduation Ceremony 2019~ 🎓👑
🎓🎓Myanmar Noble University (MNU)၏ 1st Bachelor Degree and 6th HND (Higher National Diploma) Graduation Ceremory 2019 ကို ရန်ကုန်မြို့၊ Melia Hotel Grand Ballroom တွင် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက် (စနေနေ့) မနက် ၉းဝဝနာရီမှ ၁၂းဝ၀ အထိ ခမ်းနားစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။🎓🎓
🎓👑ယနေ့ပြုလုပ်သော ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားသည် Myanmar Noble University (MNU) နှင့် University of East London တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော ပထမအကြိမ်မြောက် Bachelor Degree ဘွဲ့ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း နှင့် ခြောက်ကြိမ်မြောက် ( BTEC Pearson) Higher National Diploma (HND) ဘွဲ့ချီးမြှင့်သည့်အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်။👑🎓
👑🎓ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် Myanmar Noble University (MNU)၏ Principal Mr. Alexey Naumov ၊ UEL (University of East London)မှ Dr. Stephanie Sandland၊ Myanmar Noble University ၏ Academic Advisors များဖြစ်ကြသော Professor Dr. Kan Zaw, Professor Dr. Moe Moe Khaing၊ BOD အဖွဲ့ဝင်များ၊ Academic Director ဒေါ်သက်ဇံဖြူ၊ Department Head များ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ဘွဲ့ရမောင်မယ်များ၊ မိဘများ ၊ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ နှင့်မီဒီယာများ တက်ရောက်အားပေး ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့ကြပါသည်။👑🎓
👑🎓ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားကိုမြန်မာ့ကျက်သရေဆောင်ဆိုင်းဝိုင်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်ကာ Myanmar Noble University မှ Principal Mr. Alexey Naumov ကဘွဲ့ရမောင်မယ်များအား ဘွဲ့နှင်းသဘင်မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးခဲ့ပါ သည်။ 👑🎓
👑🎓ယခုနှစ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် ဘွဲ့ရမောင်မယ် စုစုပေါင်း (၃၀၀) ကျော် တို့ကို အောင်မြင်စွာ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းကဏ္ဍတွင်ဘာသာရပ်တစ်ခုခြင်းဆီမှ ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့သော ဘွဲ့ရမောင်မယ်များအား သက်ဆိုင်ရာဘွဲ့များ ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ပညာရည်ထူးချွန်ဆု များကိုလည်း တစ်ပါတည်းချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်
👑🎓Congratulations to our Graduated Students🎓👑
Myanmar Noble University မှလည်း ဘွဲ့ရမောင်မယ်များအတွက် မိသားစုများနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရသလို ဘွဲ့ရမောင်မယ်များ မိမိတို့၏ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုများဆီ အရောက်လှမ်းနိုင်စေရန် အတွက်လည်း ဆန္ဒပြုရင်း ဆုမွန်ကောင်းများပို့သလိုက်ရပါသည်။👑👑💵
🏤 အမှတ် (၆-က)၊ ကြိုးစက်ရုံလမ်း၊ (ခ)ရပ်ကွက်၊ သုဝဏ္ဍ ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
☎Bachelor/HND- ၀၉ ၄၄၈၀၆၆၆၆၀-၃/ ၀၉-၇၈၀၆၃၉၅၇၇ သို့ အသေးစိတ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Activities - Alpine Drinking Water Factory Site Visit
Mechanical Engineering and Electrical & Electronic Engineering Students from Myanmar Noble College hadasite visit to Alpine Drinking Water Factory
• To Learn the common practices for manufacturing
• To integrate facilities and systems for producing quality products
• To learn the plant layout design, planning and control, productivity and continuous improvement, quality control and equipment effectiveness.
The benefit and usefulness for their related subject
• The students will be able to understand the principles of drinking water and energy drink manufacturing system.
• They will be able to select the most appropriate production processes and associated facility arrangements for manufacturing products of different material types and designaproduction system incorporatinganumber of different production processes.
163 students and teachers from Myanmar Noble College donated blood at the National Blood Bank in Yangon General Hospital on the third of February 2014. 2.Dr. Thida Aung from the National Blood Bank explained to the students. 63 students and teachers from Myanmar Noble College donated blood at the National Blood Bank in Yangon General Hospital on the third of February 2014. 2.Dr. Thida Aung from the National Blood Bank explained to the students. 63 students and teachers from Myanmar Noble College donated blood at the National Blood Bank in Yangon General Hospital on the third of February 2014. 2.Dr. Thida Aung from the National Blood Bank explained to the students. 63 students and teachers from Myanmar Noble College donated blood at the National Blood Bank in Yangon General Hospital on the third of February 2014. 2.Dr. Thida Aung from the National Blood Bank explained to the students.Thida Aung from the National Blood Bank explained to the students.
Myanmar Noble University offers accredited and proven educational services in line with the latest education system that are designed to develop young people withinareasonable timeframe to become independent learners with well-developed and well-practiced learning strategies and techniques of their own and possessasound foundation of well-rounded general knowledge, an inquiring mind andastrong motivation and confidence as well as interpersonal skills to pursue different fields of specialized study at an advanced level. read more
Campus Life At MNU Ask Questions Event & News